ऐश्वर्याको बायोपिकमा कसलाई खेलाउने! - Cinema Sansar
ऐश्वर्याको बायोपिकमा कसलाई खेलाउने!
बलिउडमा यतिखेर बायोपिक सिनेमाको व्यापार फस्टाउँदो छ। चर्चित व्यक्तिहरुको जीवनमा आधारित सिनेमा दर्शकले निकै मन पराईरहेका छन्। यस कारण बलिउड निर्माता निर्देशक त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई खोजिरहेका छन्, जसमाथि सिनेमा बनाउन सकियोस र उक्त सिनेमा दर्शकलाई पनि मन परोस्।
अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको जीवन पनि तीमध्ये एक हो, जसमाथि दर्शकको अत्याधिक चासो रहेको छ। किनभने उनको जीवनप्रति पनि मानिसहरुको अत्याधिक रुचि छ। सुन्दरताको मामलामा उनी बलिउडका टप एक्ट्रेसमध्ये एक हुन् भने विश्व सुन्दरी पनि बनिसकेकी छिन्। उनले बलिउड सिनेमा उद्योगबाट सफलताको चरम आनन्द लिईसकेकि छिन् भने उनको प्रेम जीवन पनि दर्शकको रुचिको विषय बनेको छ।
एक अन्र्तवार्तामा ऐश्वर्याले आफ्नो जीवनबारे किताब पनि लेख्न चाहेको बताएकी छिन्। उनको अनुसार उनको जीवनमाथि छिट्टै नै बायापिक बन्न सक्छ। कीनकी यसलाई लिएर उनी सकरात्मक छिन्। तर सबैभन्दा गाह«ो कुरा यो हो की उनको बायोपिकमा अभिनयचाहिँ कस्ले गर्ने? किनभने सुन्दरताको मामलामा उनीजस्ती नायिका भेटाउनु भनेको चुनौतीको विषय हो।
ऐश्वर्याको बायोपिकमा कसलाई खेलाउने
एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरले बबाल
रिहानाको लुगा झरेपछि
हलिउडकी प्लस साइज मोडल न्युड अवतारमा